Aprily 4, 2022	Off	By roma
The counter-strike dia novolavolaina ary navoakan'i Valve tamin'ny 1999 ho fanovana ny andiany Half-Life. Antsoina koa hoe Counter-Strike 1.6 ary Half-Life: Counter Strike ao amin'ny fiarahamonina gamer. Io no lalao voalohany amin'ny andiany Counterstrike, izay azon'ny mpampiasa Windows tamin'ny taona 2000. Namoaka fanavaozana isan-karazany sy dikan-tenin'ny lalao tany am-boalohany ho an'ny rafitra fiasana hafa ihany koa ny mpamorona.
Izy io dia mpitifitra olona voalohany ahafahanao ho lasa mpikambana ao amin'ny ekipa manohitra ny mpampihorohoro na mpampihorohoro ary hamita ny tanjonao. Ireo izay te hankafy ny gameplay raha tsy mandray anjara amin'izany dia afaka mijery ny lalao mpilalao hafa amin'ny fomba mpijery.
Mba hahazoana antoka ny fandreseny dia tsy maintsy mamita ny tanjony ny ekipa roa tonta. Raha tsy izany dia afaka mamono ny mpikambana ao amin'ny ekipa hafa koa izy ireo. Amin'ny fiantombohan'ny fihodinana tsirairay, ny ekipa dia mipoitra amin'ny toerana misy azy amin'ny faran'ny sarintany tsirairay, ary tsy maintsy miady amin'ny lalana mankany amin'ny tanjona, izay eo afovoany.
Tsy maintsy hiandry ny fahavitan’izany sy hifoha indray amin’ny fihodinana manaraka ireo lany amin’ny fihodinana ankehitriny. Mba hamporisihana ny lalao ara-drariny, ny mpilalao tsirairay dia manomboka amin'ny antsy sy basy poleta. Afaka mividy fitaovam-piadiana vaovao sy tsara kokoa ianao amin'ny alàlan'ny fampisehoana tsara kokoa sy fandresena ny fihodinana teo aloha. Ny sasany amin'ireo tanjona gameplay mahazatra indrindra amin'ny Counter Strike 1.6 omena etsy ambany.
Fanavotana takalon'aina: Nisambotra takalon'aina ny mpampihorohoro, ary tsy maintsy mamonjy azy ireo amin'ny fotoana voafaritra ny ekipa miady amin'ny mpampihorohoro; raha tsy izany dia mandresy ny mpampihorohoro
Famonoana: Ny mpikambana ao amin'ny ekipa manohitra ny fampihorohoroana dia nomena ny satan'ny VIP, ary ny mpiara-miasa hafa dia tsy maintsy mitondra ilay mpikambana amin'ny toerana voafaritra ao amin'ny sarintany, raha ny mpampihorohoro kosa dia tsy maintsy mamono ny VIP mba handresy alohan'ny fotoana lany.
Fanafoanana baomba (Bomb defuse): Ny mpampihorohoro dia manomboka amin'ny baomba iray izay tsy maintsy amboleny amin'ny toerana voatondro amin'ny sarintany, raha toa kosa ny ekipa miady amin'ny fampihorohoroana dia tsy maintsy manafoana ny baomba na mamono mpampihorohoro alohan'ny hametrahany ny baomba.
Ny lalao dia ahitana modely efatra samy hafa ho an'ny mpampihorohoro sy ny ekipa miady amin'ny fampihorohoroana. Segaondra vitsivitsy monja no azonao hanovana ny toetranao alohan'ny hanombohan'ny lalao, koa ataovy izay hanovana ny toetranao.
Fitaovam-piadiana sy fitaovana
Hatramin'izao, mihoatra ny 25 fitaovam-piadiana in Counter-Strike amin'ny sokajy melee, pistol, SMG, fanafihana, basim-borona, sniper ary basy milina. Basy sniper no fitaovam-piadiana lafo indrindra amin'ny lisitra, raha ny basim-borona kosa dia mahavita mamaha ny fahavoazana be indrindra amin'ny fihaonana akaiky. Basy sniper no safidy voalohany ho an'ny mpilalao matihanina satria afaka maka tifitra sy mamono fahavalo amin'ny bala tokana izy ireo.
Mba hanampiana anao amin'ny famoahana ny fahaiza-manao tetika amin'ny halehiben'izy ireo dia omena fitaovana sivy ihany koa ianao izay manomboka amin'ny grenady ka hatramin'ny ampinga ary ny kitapo fanafoanana baomba. Ho afaka hahita ao anaty haizina ianao rehefa avy nividy solomaso fahitana alina ho an'ny roanjato dolara. Ny sasany amin'ireo fitaovam-piadiana sy fitaovana ireo dia misy ho an'ny ekipa iray ihany, koa fidio tsara ny ekipanao.
Tagstoetra counter strike 1.6 counter strike 1.6 Download Counter-Strike 1.6 - Wikipedia cs 1.6 Download cs 1.6 Wikipedia CS wikipedia Download misintona cs fitaovana counter-strike 1.6 fitaovana cs Gameplay gameplay counter-strike 1.6 lalao cs Antsasak'aina antsasaky ny fiainana wikipedia Valve valves wikipedia fitaovam-piadiana Wikipedia
downloading Counter-Strike 1.6 Tsy etona
Counter-Strike 1.6 Ampidino ny dikan-teny tsy etona